Lohahevitra amin’ity taona ity mihitsy io, hoy ny fanazavana. Ho an’ny DREDD Atsinanana izay dia efa vonona tanteraka ny amin’ny fihatrehana izany izy ireo, hoy ny talem-paritra, Tezena Lionel Armando. Efa vonona ny zanakazo ho volena izay efa miandry fotsiny ao amin’ny toeram-pambolen-janakazo ao Toamasina. Ny taona 2019 dia zanakazo maha enika velaran-tany 2250 ha tamin’ireo 3000 ha no efa vita ary niarahana niasa tamin’ireo kaominina sy vondron’olona ifotony mandrafitra ny Faritra Atsinanana . Manomboka amin’ity taona vaovao ity dia paikady vaovao no entin’ny ministera ka isan’izany ny ao atsinanana izay efa nametrahana lamina maty paika hoy hatrany ity tale ity. Ho amin’ny fiarovana ny tontolo iainana dia ho entitra ihany koa ny fiarovana ireo zavaboary hafa toy ny biby sy ny doro tanety ary ny tavy. Akoatra ny asa tanterahina eo amin’ny fanajariana sy ny fiarovana ny tontolo iainana dia nohezahina ihany koa ny fanavaozana ny anatin’ny toeram-piasana, hoy hatrany ny fanazavana , ka isan’izany ny fanitarana ny toeram-piasana sy ny fanavaozana ireo toerana nampijaly ny mpiasa hatramin’izay sy ny fandraisana ireo mila raharaha. Teo koa ny fanamboarana ny toerana natokana ho an’ny ivon-toerana famadihana ny fako ho tonga zavatra ilaina an-davan’andro.